Konke malunga ne-Instagram: Into ekufuneka uyazi ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Disemba 26, 2018 0 IiCententarios 952
Xa kuziwa kwiinethiwekhi zentlalo, i-Instagram isatsha kakhulu kwaye kukho abantu abangayaziyo indlela yokuyisebenzisa ngokuchanekileyo. Oku kubangela ukuba abantu abaninzi bajoyine, kodwa akukho nzima konke konke.
Ukuba uthathe kuphela ixesha lokujonga isicelo kunye newebhusayithi, uya kubona ukuba kulula ukuyisebenzisa.
Ukuba ufuna ukujoyina i-Instagram, kodwa uye udimazeke ngokungazi ukuba uyisebenzise njani, kufuneka ufunde kwangaphambili ukuze wazi Yonke into oyifunayo kufuneka uyazi malunga ne-Instagram.
I-Instagram yinethiwekhi yentlalo esebenza kuphela ngeefoto. Xa ubhalisa, bakunika iprofayili kwaye unokugcwalisa ezinye iinkcukacha ngawe, kodwa emva koko, ziyimifanekiso yonke.
Thatha umfanekiso, imithwalo kwisicelo kwifowuni yakho okanye kwiwebhusayithi yekhompyuter yakho kwaye emva koko unokuyinika igama, ezinye iithegi kwaye unokufaka nokucoca iifayile.
Unokukhetha ukwabelana ngomfanekiso kwezinye iinethiwekhi zentlalo, ezinjenge-Facebook kunye ne-Twitter, emva koko ucofe isabelo, umfanekiso uphila kwaye abanye abantu bayawubona kwiprofayile yakho. Kwakhona Ungasebenzisa amanye amabinzana kule nethiwekhi yentlalo.
Njengezinye iiwebhusayithi zokuncokola, unokongeza abahlobo bakho ukuba babone iifoto zabo kwiindaba zakho kwaye bayayibona eyakho kweyabo. Akukho mfuneko yokuba babe ngabahlobo bakho ebomini benene, kodwa kungcono ukuqala ngabantu obaziyo.
Unokongeza ishishini njengabahlobo. Umzekelo, ukuba uthanda ukuthatha imifanekiso yeembadada, ungongeza zonke ibranti kunye nabanye abaqokeleli abadumileyo. Unganqikazi ukutsho ibinzana elihle kumhlobo wakho omkhulu kwi-Instagram.
Ke, abanye abantu abanomdla ofanayo baya kukubona kuluhlu lwakho lwabahlobo kwaye baya kuba nako ukongeza wena njengomhlobo wakho. Nje ukuba yenzeke loo nto, iya kukhula ibe nabahlobo ongakhange udibane nabo.
Usenokuba uyazibuza ukuba iyintoni na iligi, kuba ikhankanywe apha ngasentla. Kulungile ilebhile yingxelo okanye igama elichaza umfanekiso wakho. Umzekelo, ukuba unefoto yehotele eLas Vegas, unokuyibhala igama lehotele kunye nendawo.
Ithegi ihlala iqala nge-hashtag, ke kulula ukufumana. Abasebenzisi baya kukhangela amagama aphambili kunye nomfanekiso wabo uya kuvela kwiziphumo zokukhangela kuloo tag. Nje ukuba abantu babone umfanekiso wakho, uya kuqala ukuba nabahlobo abaninzi.
Ukuba awongezi i-tag kumfanekiso wakho, akukho mntu uya kuyibona. Kuphela ngabantu abakuluhlu lwabahlobo bakho abanokubona lo mfanekiso. Ukuba ufuna ukuba imifanekiso yakho igcinwe iyimfihlo, oku kulungile, kodwa ukuba ufuna abahlobo abaninzi abanomdla ofanayo, kufuneka umake imifanekiso yakho. Kwakhona Kukho izakhelo ezipholileyo kakhulu ze-Instagram.
Abantu banomdla wokuya ngaphezulu kunye neethegi zabo. Banokuba nomfanekiso ngaphezu kwe-20 tags kumfanekiso. Umfanekiso uya kuvela kwiziphumo zokukhangela zezi tag, kodwa Intengiso ye-Instagram qala ukunciphisa umda weelebheli ozisebenzisayo.
Ukuba ufuna ukongeza abahlobo abaninzi kwaye ufikelele kubantu abaninzi, kuya kufuneka usebenzise iithegi zakho ngobulumko. Unokufumanisa ukuba yeyiphi i-tag eyona nto ithandwa kakhulu kwaye emva koko ulayishe umfanekiso wethegi leyo. Okanye unako Thenga abalandeli be-Instagram ukwandisa inani labahlobo abakulandelayo kwinethiwekhi yezoluntu.
1 Yintoni i-Instagram?
Iindlela ze-8 zokunyusa abalandeli be-Instagram ngaphandle kokuchitha imali eninzi